Apple kwetara nsogbu na App Store algorithm | Esi m mac
Nzaghachi nke usoro mkpesa si ụfọdụ ndị ọzọ ngwa ngwa mmepe a gara aga izu ụka banyere nsogbu na Storelọ Ahịa NgwaPhil Schiller, Onye isi oche ndị isi Apple nke Worldwide Marketing, Apple kwetara na Apple maara nsogbu ahụ ma gosipụta na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na ngwọta. Schiller ọnwa ole na ole gara aga were ọrụ maka ọdịnaya Apple na mgbasa ozi site na SVP. Mgbe ahụ anyị na-ahapụ gị tweet ebe o nyela iru ya na isi okwu nke anyi ga ekpughe ma emechaa, na metụtara Spain.
@Nwanyi_ocha @Adora Kwesịrị ime. Anyị ga-eleba anya na ya. Daalụ.
- Philip Schiller (@nkechi) 13 March nke 2016
Dabere na akụkọ dị iche iche sitere n'aka ndị ọrụ na United States, United Kingdom, New Zealand, Australia, España na ọtụtụ mba ndị ọzọ, algọridim nke App Store enyeghị ọkwa ziri ezi maka ngwa ndị ahụ n'ụdị dị iche iche, ya mere ngwa ndị ahụ pụtara n’otu aha n'ime ụfọdụ ngalaba dị ka 'Featured'. N'ebe a na onyonyo a ị ga - ahụ nsogbu anyị na - ekwu maka ya.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-elekwa anya 'ngwa ngwa' na nsonaazụ ọchụchọ gị. Ọ bụghị ndị ọrụ niile nọ na United States nwere ike ịmegharị okwu ahụ, na-atụ aro na nke a nwere ike ịbụ nsogbu mpaghara kedu App Store algorithm agbajiri kpamkpam. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, nke a ekwesịghị ime na Apple maara nsogbu a.
N’ọnwa Nọvemba, a na-akọ na Apple mere isi algorithm ndozi nke nwere ngwa dị na Storelọ Ahịa App, agbanyeghị mgbanwe ndị ahụ lekwasịrị anya na ịlaghachi nsonaazụ kacha baa uru mgbe ọchụchọ isiokwu gachara. Apple ekwupụtabeghị nkọwa banyere otu ya algorithm na-enyekarị iwu edemede ndị a, agbanyeghị, n'ozuzu anyị chere na ndị ahụ bụ wụnye ugboro, ndị nwere karịa comentarios, ọnụ ọgụgụ kpakpando, na ahịa ha na-ekere oke na nhazi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple kwetara nsogbu na App Store algorithm
Adobe Ahụmịhe Ahụmịhe dị maka Mac